Hướng dẫn 12 cách làm nước mắm chua ngọt ngon, đơn giản, dễ làm | Muasalebang - Muasalebang
Hướng dẫn 12 cách làm nước mắm chua ngọt ngon, đơn giản, dễ làm | Muasalebang
Đang Đọc: Hướng dẫn 12 cách làm nước mắm chua ngọt ngon, đơn giản, dễ làm | Muasalebang in Muasalebang
Indlela yokwenza isoso senhlanzi enoshukela nemuncu ilula kodwa akuwona wonke umuntu ongenza ukunambitheka okulungile ukufanisa isidlo. Ngakho-ke kulesi sihloko, ngizoqondisa wonke umuntu ukwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ecwilisa izitsha ezimnandi kakhulu.
1 1. Indlela yokwenza amaroli esaladi e-sweet and sour fish sauce.
1.1 1.1 I-sauce ye-garlic fish fish.
1.2 1.2 Isinongo sesosi yezinhlanzi.
2 2. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ngeminenke
3 3. Indlela yokwenza i-fish sauce ngenyama ebilisiwe
4 4. Indlela yokwenza i-sauce yenhlanzi enomnandi neyomuncu nge-spring rolls.
5 5. Ungayenza kanjani i-Banh Xeo fish sauce?
6 6. Yenza isoso yenhlanzi ukuze udle ama-noodle anenhlama kabhontshisi kanye nama-shrimp paste
7 7. Indlela yokwenza i-fish sauce exutshwe nesaladi
8 8. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ecwilisa imiqulu yasentwasahlobo
9 9. Indlela yokwenza i-fish sauce ngenyama eyosiwe.
10 10. Indlela yokwenza i-banh cuon fish sauce
11 11. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi yemifino
1. Indlela yokwenza amaroli esaladi e-sweet and sour fish sauce.
Ngezitsha eziningi, i-sauce iyisici esiyinhloko esinquma ukunambitheka. Isosi yokudipha emnandi ithuthukisa ukunambitheka kwesitsha. Esitsheni ngasinye, kuzoba nesoso yokucwilisa ehambisana nazo. Futhi nama-saladi rolls nawo, isoso yokudipha iwukhiye. Lapha sizofunda ukwenza isitsha esiphundu, esikhangayo futhi esilula sesaladi ye-fish sauce dipping.
1.1 I-sauce ye-garlic fish fish.
Isoso ye-garlic eyisipele yezinhlanzi iyisoso ethandwayo emathileyi elayisi ezweni lakithi. Ngokuvumelana kokunambitha, indlela elula kakhulu, esheshayo futhi engadli isikhathi yokwenza isoso yenhlanzi, isoso ye-chili ye-fish fish idumile ekudleni.
5 wezipuni of okumnandi fish sauce
6 wezipuni selehlile amanzi abilisiwe
4 wezipuni ushukela omhlophe
1 isipuni kalamula
Isinyathelo 1: Hlanza u-garlic, ugeze futhi ugaye. Geza upelepele, susa imbewu bese uqoba kahle. Uma i-chili ne-garlic kugayiwe, izoba ngcono isoso.
Isinyathelo sesi-2: Faka izipuni ezi-4 zikashukela endishini bese uhlanganisa izipuni eziyi-6 zamanzi abilisiwe ukuze uphole, ugovuze ukuncibilikisa ushukela, bese ufaka izipuni eziyi-5 zesoso yezinhlanzi. Okulandelayo, engeza isipuni esingu-1 sejusi kalamula ukuze wenze ngendlela oyifisayo ubumnandi nobumuncu ukuze buhambisane nokunambitha kwakho. Ekugcineni, engeza i-garlic egayiwe ne-chili futhi ugovuze kahle. Leso isitsha se-chili garlic sauce siphelile.
Qaphela: uma abantu bethanda isitsha sesoso ewugqinsi, sizochoboza ugalikhi kanye nopelepele. I-garlic kanye ne-chili lapho kuchotshoziwe kuzokhipha wonke ukunambitheka. Ijusi kagalikhi ochotshoziwe uma ixubene nesoso yokudipha izokwakha ukungaguquguquki okukhulu.
1.2 Isinongo sesosi yezinhlanzi.
Isoso yezinhlanzi iyisoso ecacile futhi eyingqayizivele. Lena isoso yokucwilisa engasetshenziselwa izitsha eziningi ezahlukene. Ngesosi yenhlanzi yesinongo, singakuzwa ukunambitheka okugcwele okumuncu, okubabayo, okunosawoti, okumnandi kuyo. Kungaba yinto eyeqile uma singazi isinongo sesosi yezinhlanzi.
5 wezipuni isinongo sauce
3 wezipuni ushukela
I-garlic, i-lemongrass, i-chili.
Ukucutshungulwa kokuqala: Sebenzisa isisefo ukuze uhlukanise umzimba namanzi enhlanzini yesinongo, khipha okusele kusoso yezinhlanzi. Uphayinaphu uzohlanzwa. I-lemongrass egayiwe. I-garlic ehlutshiwe, igezwe futhi igaywe. Ushizi wagezwa wagaywa.
Beka ibhodwe eziko, linda lize lishise, faka amafutha. Engeza u-garlic bese usakaza kuze kube yiphunga elimnandi, bese ufaka i-lemongrass. Uma i-lemongrass iyigolide, engeza yonke i-chili egayiwe.
Uma ingxube kagalikhi, i-lemongrass, nopelepele iphuzi, engeza izipuni eziyi-5 zesosi yesinongo, bese ufaka uphayinaphu ohlanzekile, bese ufaka izipuni ezi-3 zikashukela. Letha i-sauce yokucwilisa ukuze ibilise, isinongo ukuze ivumelane nokunambitheka kwakho.
2. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ngeminenke
Iminenke ebilisiwe iyisidlo se-rustic nesansuku zonke sabantu baseVietnam. Ukwandisa ubumnandi beminenke ebilisiwe, isoso yokudipha iyisihluthulelo salokho. Ngakho-ke ungayenza kanjani isitsha esimnandi sesoso yokucwilisa umnenke, ake sithole.
1 isipuni se-fish sauce
2 wezipuni zamanzi ahlungiwe
Amanye amahlamvu kalamula
I-garlic, i-chili, i-kumquat, i-ginger, i-lemongrass
Ukucutshungulwa kokuqala: I-garlic, i-ginger iyahlutshiwe futhi igezwe. I-ginger echotshoziwe izongeza ukunambitheka okwengeziwe. Geza futhi usike i-lemongrass ibe yizicucu ezincane. Peppers imbewu futhi oqoshiwe. Sika amaqabunga e-lemongrass, amancane kuba ngcono. Ukupheka i-fish sauce
Faka isipuni esingu-1 sikashukela, isipuni esingu-1 se-fish sauce, izipuni ezimbili zamanzi ahlungiwe enkomishini, gqugquzela kuze kuncibilike ushukela. Beka ibhodwe elincane esitofini, faka ingxube yamanzi ancibilikisiwe bese ubilisa, bese uyeke ukuba aphole bese uwathela endishini.
Hlanganisa i-sauce yokucwilisa i-chili, u-garlic ogayiwe, i-ginger egayiwe, ne-lemongrass eqoshwe kahle enkomishini ye-fish sauce, bese ucindezela ama-kumquats ambalwa, kuye ngokunambitha kwakho, engeza inani lama-kumquats. Ekugcineni, engeza amaqabunga kalamula futhi isoso yokudipha umnenke isiphelile. I-sauce yokucwilisa eqediwe izoba nokunambitheka okwanele okumuncu, okubabayo, okusawoti, okumnandi kanye ne-viscous kancane.
3. Indlela yokwenza i-fish sauce ngenyama ebilisiwe
Isidlo sengulube ebilisiwe kumele sijwayeleke kakhulu kuwo wonke umuntu empilweni yansuku zonke. Ngakho-ke ukwenza isidlo sibe mnandi kakhulu, kubalulekile ku-sauce yokucwilisa. Sicela ubheke indlela yokwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ngokucwilisa inyama ebilisiwe ngezansi:
2 wezipuni fish sauce
4 wezipuni amanzi ahlungiwe
2 wezipuni kalamula
2 wezipuni ushukela
I-garlic ehlutshiwe echotshoziwe nge-chili, lungisa isigamu selamula, bese ubeka u-garlic ochotshoziwe kanye nopelepele endishini, engeza izipuni ezimbili zikashukela nezipuni ezingu-4 zamanzi ahlungiwe bese ugoqa kuze kuncibilike ushukela.
Uma ushukela usuhlakazeke ngokuphelele, engeza izipuni ezi-2 ze-fish sauce nezipuni ezimbili zejusi kalamula ukuze unambitha ngokuthanda komndeni wakho. Uma uthanda okumuncu noma ufuna ukunambitheka okunamandla, ungangeza i-lemon ne-fish sauce kuye ngokunambitha kwakho.
Uma ufuna isitsha se-sauce yokucwilisa sibe sihle esikhundleni sokugxoba, ungagaya ugaliki kachili bese uwufaka kugalikhi ka-chili, ozobe usuntanta phezulu ukuze ubukeke ukhanga kakhulu.
4. Indlela yokwenza i-sauce yenhlanzi enomnandi neyomuncu nge-spring rolls.
I-sauce yokucwilisa yama-spring rolls nayo iyinkimbinkimbi kakhulu, ngakho-ke ngizokwethula indlela yokwenza isoso yenhlanzi emnandi futhi elula ekhaya:
15 ml i-fish sauce
I-100 g yenyama yengulube
5 g imbewu yesinongo
15 g anyanisi onsomi
Chaza ufulawa werayisi onama-glutinous ngamanzi amancane. Amantongomane ayosiwa bese ayagaywa.
U-anyanisi onsomi oqotshwe kahle, ugaywe uze ube nephunga elimnandi, bese ufaka inyama egayiwe bese ugoqa-gazinga. Lapho inyama isivuthiwe, ubeka amakinati agayiwe esiqhingini, kanye noshukela omncane, isoso yenhlanzi, isinongo, nopelepele ukuze kunambitheke kahle.
Ekugcineni, thela isitsha sikafulawa werayisi onama-glutinous oncibilike emanzini epanini bese upheka kuze kube yilapho isoso sijiya.
5. Ungayenza kanjani i-Banh Xeo fish sauce?
Ukwenza i-banh xeo ibe mnandi kakhulu, isoso yokucwilisa ibalulekile, ake sifunde ukwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ukucwilisa amakhekhe:
6 wezipuni isoso yezinhlanzi ezimnandi
4 wezipuni zamanzi ahlungiwe
Lungisa u-garlic ohlutshiwe, u-chili ogeziwe futhi ogayiwe. Hlanza izaqathe, bese uzigcoba, uzicwilise emanzini anosawoti, bese ukhama ngaphandle kwamanzi.
Chaza izipuni ezi-3 zikashukela nezipuni ezi-4 zamanzi ahlungiwe, ngemuva kokuthi ushukela uchitheka, engeza izipuni eziyi-6 zesoso yezinhlanzi, ujusi kalamula, ugalikhi ogayiwe kanye nopelepele ukunambitha.
Ekugcineni, engeza izaqathe ezichotshoziwe futhi unesitsha esimnandi sesoso yokudipha amakhekhe.
6. Yenza isoso yenhlanzi ukuze udle ama-noodle anenhlama kabhontshisi kanye nama-shrimp paste
Sicela ubheke indlela yokwenza i-shrimp fish sauce ukuze uyidle nge-vermicelli:
Izithako: 2 wezipuni ze-sauce yezinhlanzi esiphundu, isipuni esingu-1 sikashukela, 2 upelepele, 1/2 isipuni sikaviniga. 1/2 ilamula. 4-5 wezipuni amanzi abilisiwe ukupholisa.
Isinyathelo 1: Lungisa izithako
Hlanza i-garlic, susa isiqu, bese uyigaya kahle.
Ulamula owugoqa kancane ukuze uthambe, ungagingqiki uqine kakhulu ngoba into esekhasino likalamula izokwenza ijusi kalamula ibe munyu, bese uyisika ngobude, ukhiphe imbewu kalamula, ngokwenza lokho uma ukukhama uzothola ijusi eningi ngaphandle kokubaba.
Isinyathelo sesi-2: Hlanganisa upelepele kalamula kanye nesoso yezinhlanzi zikagalikhi
Faka ushukela emanzini abilayo ukuze uphole, bese ugoqa kahle ngesandla kuze kube yilapho ushukela uhlakazeka ngokuphelele. Okulandelayo, wengeza i-fish sauce noviniga, ugovuze kahle ukuhlanganisa izithako. Ngenxa yokuthi ungeze uviniga, kufanele ukhumbule ukufaka ilamula ngokulinganisela kanye nenkathi yokunambitha ukuze ungabi muncu kakhulu.
Ekugcineni, wengeza ugalikhi nopelepele kugalikhi kanye nepelepele ukuze wenze isoso yenhlanzi ibe yinhle kakhulu futhi ibe mnandi.
Qaphela: Ukuze isitsha se-sauce yokucwilisa sibe mnandi futhi sijwayelekile, kufanele ukhethe okunameka okumnandi, okubushelelezi kwezimfanzi okunephunga elimnandi.
7. Indlela yokwenza i-fish sauce exutshwe nesaladi
Ukwenza isoso yenhlanzi exutshwe nesaladi kufana ncamashi nendlela yokwenza isoso yenhlanzi emnandi nemuncu, ake sibone ukuthi ungayenza kanjani ngezansi:
1 ithisipuni i-fish sauce
1 isipuni samanzi ahlungiwe
3 ama-clove kagalikhi, 2 upelepele we-chili
Ukulungiswa kokuqala kwezithako: imbewu ehlutshiwe kalamula ehlutshiwe kalamula, u-garlic ohlutshiwe ogaywe nge-chili.
Chaza ushukela namanzi, ugovuze kahle lapho ushukela uncibilika, engeza ijusi kalamula, isoso yenhlanzi nogalikhi ogayiwe kanye nopelepele, ugovuze kahle ufake inkathi ukuze ivumelane nokunambitheka kwakho.
Ngemuva kokuthi i-sauce yezinhlanzi ehlanganiswe nesaladi isiqediwe, ungaqhubeka nokuxuba izithako ukuze wenze isaladi ibe nesaladi esiphundu nge-flavour ecebile.
8. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi enoshukela nemuncu ecwilisa imiqulu yasentwasahlobo
Ukuze uthole isitsha esiphelele nesimnandi sesosi yenhlanzi enama-spring rolls, sicela ubheke iresiphi elandelayo:
120 ml amanzi ahlungiwe
60 ml i-sauce yenhlanzi emnandi
4 ama-clove kagalikhi, 2 upelepele we-chili
Ukulungiswa kokuqala kwezithako: I-garlic ehlutshiwe, igezwe, ikhishwe imbewu kapelepele, bese igaywa ngegalikhi. Futhi usike ilamula ngesigamu, susa imbewu bese ucindezela ijusi kalamula.
Faka ushukela omhlophe namanzi ahlungiwe, ugovuze kuze kuncibilike, bese ubilisa nge-fish sauce bese uvumela ukuba kuphole.
Lapho ingxube yesoso yenhlanzi iphola, engeza ijusi kalamula nesweli egayiwe kanye nopelepele, ugovuze kahle, inkathi ukunambitha futhi uqedele.
9. Indlela yokwenza i-fish sauce ngenyama eyosiwe.
Lesi sidlo sinezindlela eziningi zokwenza, ungaxuba ngokuvumelana neresiphi yokwenza isoso senhlanzi enomnandi neyomuncu. Noma ukwenza isidlo sithakazelise, ngizokuqondisa ukuthi wenze isoso yenhlanzi ye-lemongrass ngenyama eyosiwe:
1/3 indebe emnandi ye-fish sauce
3/4 inkomishi amanzi ahlungiwe
1/4 indebe ushukela
I-Kumquat Garlic, i-chili, i-lemongrass
Ukucutshungulwa kokuqala: Okokuqala, usahlanza upelepele (susa imbewu), cwecwa utshani belamula bese uyawugeza, ucwebe ugaliki bese uyawugeza, bese ugawula ugaliki, ulamula, kanye nopelepele. Ama-kumquats ayagezwa futhi asikwe abe mncane, futhi ingxenye iyacindezelwa ukuze ijusi ithathe indawo yejusi kalamula, sebenzisa ama-kumquats ukuze isoso lenhlanzi libe nephunga elimnandi.
Engeza ushukela emanzini ahlungiwe bese ugoqa kuze kuhlakazwe, engeza i-fish sauce kanye nejusi ye-kumquat ukuze i-asidi ilungile. Ekugcineni, engeza ingxube kagalikhi egayiwe, i-chili, ne-lemongrass, ugovuze kahle, unambithe futhi ukuze unambitha futhi ugcwalise indishi yesoso yenyama eyosiwe emnandi.
Ngalesi iresiphi, ifaneleka kakhulu izitsha ezigazingiwe zenkukhu nedada.
10. Indlela yokwenza i-banh cuon fish sauce
Ake sibone indlela yokwenza i-banh cuon fish sauce ibe lula futhi kulula ukuyenza ngezansi:
3 wezipuni esiphundu inhlanzi sauce
3 wezipuni uviniga
3 wezipuni ushukela omhlophe
I-Lemon, i-garlic, i-chili
I-garlic, i-chili ihlanzwa futhi igayiwe, imbewu kalamula isusiwe futhi yakhanywa ukuze kukhishwe ijusi.
Engeza ushukela, i-fish sauce, uviniga, ijusi kalamula ukuze uncibilike, ngemuva kokuthi ushukela uhlakazekile, ungakwazi ukwengeza u-garlic, i-chili egayiwe, ugovuze kahle ukunambitha nokuqeda.
Noma ungakwazi ukushisisa ingxube yamanzi bese uyiyeka ipholile, lapho ingxube yamanzi iphola, engeza ugalikhi kanye nepelepele.
11. Indlela yokwenza isoso yenhlanzi yemifino
Kunezithako ezimbalwa zokwenza isoso yenhlanzi yemifino. Ngizokwethula indlela yokwenza isoso yenhlanzi yemifino kusuka kuphayinaphu elula futhi kulula ukwenza:
2 uphayinaphu ovuthiwe
4 izinkomishi ushukela
1 inkomishi kasawoti
1/2 indebe yesinongo semifino
15 izinkomishi zamanzi ahlungiwe
1/4 indebe yamanzi anemibala
1/4 indebe ye-soy sauce
Lungiselela izithako: Uphayinaphu uhlutshiwe wabe usuqotshwa kahle. Bese ufaka uphayinaphu ogayiwe epanini, ugovuze kahle, bese ufaka amanzi amancane abilisiwe ukuze aphole, bese ufaka ushukela, isinongo, usawoti, nesoso yesoya.
Qhubeka upheka kuze kube yilapho ingxube ihlakazeka ngokulinganayo, lapho ubona igwebu, sebenzisa i-spoon ukuze ususe wonke amanzi ukuze wenze amanzi acace. Bilisa le ngxube isikhathi esingangehora nesigamu, bese uyiyeka ipholile futhi uyihlunge ngendwangu ukuze uthole ijusi.
Bilisa ijusi elihlungiwe, bese uliyeka lipholile, inkathi ukunambitha nokusebenzisa.
Kulesi sihloko esingenhla, ngikwazile ukuthi ungayenza kanjani i-sauce yenhlanzi emnandi, elula futhi emuncu kanye nezindlela ezithile zokwenza i-sauce yokucwilisa kwezinye izitsha. Ngethemba ukuthi uzoba nezindlela zokupheka ezinhle futhi wenze amasoso akho owathandayo nokunambitha.
Xem Thêm 5 tác dụng của quả vải, cách chọn mua và các món ăn hấp dẫn | Muasalebang
Thông số kỹ thuật máy hàn điện 23Kw của hãng Hồng Ký | Muasalebang